Weerar ka dhacay Buulo Barde oo lagu dilay ciidamo Jabuutiyaan ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Weerar ka dhacay Buulo Barde oo lagu dilay ciidamo Jabuutiyaan ah
Buulo-barde – Mareeg.com: Wararka naga soo gaaraya degmada Buula-burte ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal culus uu saakay ka dhacay agagaarka saldhiga booliiska degmada, kadib markii dabley soo xirtay dareeyska militariga weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Weerarka waxaa ku dintay 2 ka tirsan ciidamada Jbuuti iyo 2 ka tirsan Alshabaab oo weeraray saldhig ay joogeen ciidamada Jabuuti ee ku sugan degmada Buulo Barde.
Guddoomiyaha degmada Buula-burte Axmed Cabdulle Weheliye ayaa xaqiijiyay dagaalka, isaga oo sheegay in ay ku dhinteen labo askari oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka midowgga Africa AMISOM.
“Haa waa uu jiraa dagaallka, ragga weerarka soo qaaday waxaa ay xirnaayeen dareyska ciidamada waxaa ay toogasho ku dilleen labo askari oo ka tirsanaa ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah howl-galka AMISOM, iyagana isla goobta ayaa lagu wada toogtay oo hadda meydkooda halkii lagu dillay ayuu yaallaa,’’ ayuu yiri guddoomiyaha degmada Buula-burte.
Weerarkan oo dhacay waaberigii saaka ayaa Col. Cusmaan Muumin oo katirsan saraakiisha ciidanka xooga dalka waxa uu sheegay in 2 nin oo katirsan Al-Shabaab ay soo xirteen tuutaha ciidanka dowlada iyagoo iska dhigaya inay katirsanyihiin ciidamada xooga dalka hase ahaatee waxa uu sheegay in ay rasaas fureen kadibna ay ciidamadu toogteen 2-dii maleeshiyo ee katirsanaa Al-Shabaab,
“Dhagar qabayaashan hubeysan waxa ay isku dayeen inay gudaha usoo galaan xarunta saldhiga u hayed ciidamada dowlada Soomaaliya iyo walaalahooda AMISOM gaar ahaan Jabuuti hase ahaatee ciidamadii ilaalada ka ahaa ayaa goobta ku toogtay markii ay rasaas ku fureen sidaa ayeyna ku geeriyoodeen” ayuu yiri Col. Cusmaan Muumin oo lahadlay warbaahinta.
Col. Ibraahim Cali Faarax oo ah taliyaha ciidamada Jabuuti ee degmada Buula-burte ayaa sheegay ragga weerarka soo qaaday markii hore u qaateen ciidammo ka tirsan kuwa dowladda madaama ay soo xirteen dareyska militariga Soomaaliya, hasse ahaatee markii la ogaaday in aysan ka tirsaneyn ciidamada bilaabeen in ay rasaas furaan.
“Waxay isku dayeen in ay soo gallaan xero ay ciidamadeena ku sugnaayeen, markii ay ciidamada isku dayeen in ay joojiyaan waxaa ay fureen rasaas culus oo ay ku dhinteen labo askari oo ka tirsanaa ciidamadeena ku sugnaa ilinka hore ee xerrada, iyagana goobta ayaa lagu toogtay dhamaantood,’’ ayuu yiri taliyaha ciidamada Jabuuti Col Ibraahim Cali Faarax.
Afhayeenka ciidamada Al Shabaab Sheekh C/caziiz Abuu Muscab oo lahadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in ciidamo mujaahidiinta katirsan oo soo xirtay darees lamid ah midka ciidanka Jabuuti ay gudaha ugaleen Hoteelka Camaloow halkaasina ay khasaaraha ugu geysteen shisheeyaha Jabuuti.
“Ciidamo hubeysan oo mujaahidiinta katirsan ayaa markale gudaha ugalay Hoteelka Camaloow ee Buula Barde halkaasi oo ay howlgal toogash ah ka wadaan”ayuu yiri Abuu Muscab oo Reuters lahadlay.
Horay ayaa Alshabaab weerar xilli habeen ah ku qaadday hotelkaas iyagoo ku sameeyey qaraxyo iyo weerar, waxaana ku dhintay askar isugu jiray Soomaali, Jabuutiyaan iyo ragii Shabaabka ahaa ee weerarka soo qaaday.
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay oo tegay Kismaayo